Injongo kunye Nemvelaphi yegama elinguPeter
U-Peterson nguStandinavian igama elithi "igama likaPetros". Igama elinikwe nguPetros lisuka kwi-Greek πέτρος (petros) , elithetha "ilitye" okanye "ilitye," kwaye sele likhethwa igama elidumiweyo kwimbali yompostile ongumKristu uPetros , okhethwe nguKristu ukuba abe 'ilitye' apho Icawa yayifumaneka. Kuqikelelwa ukuba kukho iipellings ezingaphezu kwe-700 zeeferensi yePetererson kunye nokusola ukuba igama livela kwiDenmark igama elithi Petersen.
Upelo lwePetererson lunokuba luhlobo lweMelika olufanayo lwamagama angamaNgesi angaqhelekanga afana noPetersen okanye uPettersson. Ezinye ezongezelelweyo zeeferensi zintlanu ziquka uPeters, uPetersson, uPetersen, uPeterzen kunye noPedersen.
Iqonga liqheleke kakhulu kumazwe aseYurophu afana neDenmark, iJamani, i-Holland kunye neBrussels kummandla osenyakatho-ntshona.
EDenmark, kuye kwabalwa ukuba phantse i-3.4% yabemi inenqongo iPeter.
U-Peterson ngu-63 igama elidumileyo kwi-United States.
Ezinye zegama elidumileyo igama lendoda kunye neneniso nguPetererson kuquka uJohn, uRobert, noWilliam. U-Anna, uEma, noMariya ngamanye amagama aqhelekileyo amabhinqa.
Imvelaphi yefayili iquka isiNgesi , iScottish , kunye nesiJamani .
U-Oscar Peterson: I-pianist yaseCanada kunye nomqambi we-jazz ophumelele ama-Grammy Awards ama-8
UAmanda Peterson: Umdlali waseMelika owayesakuba ngumdlalo we-comedy uthanda ukuthenga i-Love Me (1987)
UDrew Peterson: Umsolwa waphoyisa ngokubulala umfazi wakhe
U-Adrian Peterson: I-NFL ibuyela kwi-Minnesota Vikings
UDebbi Peterson: Umculi waseMerika kunye nomculi kwi-band-band, i-Bangles
I-Peterson Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela ethandwayo yohlobo lomnxeba wefayile ye-Peterson ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela isicelo sakho sePeterson.
I-FamilySearch - i-Peterson Genealogy
Khangela uphinde uphewule iirekhodi zembali kunye nemithi yentsapho yeferensi yePeterson kunye nokuhluka kwayo kwi-website ye-Intanethi ye-FamilySearch.
I-Peterson Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLwazi lweNtsapho
I-RootsWeb ibamba amanani amaninzi angabhaso adibanisa abaphandi bePeterson.
DistantCousin.com - I-Peterson Genealogy & History Family
Iinkcukacha zolwazi zamahhala kunye nolwazi lokuzalwa lomnxeba wegama lokugqibela uPeter.
Ukuze ufumane intsingiselo yegama elinikeziweyo, hlaziywa i-Name Name First Name Meanings. Ukuba, ngesizathu esithile, awukwazi ukufumana igama lakho lokugqibela elidweliswe ngezantsi, bonisa ukuba ifani ifakwe kwiGlosari yegama legama kunye neeNqununu.
Yintoni i-Old Hag Syndrome?
Izindlu Zemifanekiso - Ziziphi Iingqophiso Zakho Ngawe?
Umbulali womntwana kunye noMntwana weMolester Westley u-Allen Dodd